मैनबत्ती समाधान | Winby उद्योग र व्यापार लिमिटेड
20 वर्ष भन्दा बढीको लागि व्यावसायिक मैनबत्ती आपूर्तिकर्ता
सुगन्धित मैनबत्ती प्रयोग गर्न को लागी आवेदन
सुगन्धित मैनबत्तीहरू जीवनको स्वाद समायोजन गर्ने माध्यम बनेका छन्, चाहे त्यो तपाईं चुपचाप किताब पढ्दै गर्दा होस्, वा बिस्तारै एक कप चियाको स्वाद लिँदा होस्, वा आरामदायी तातो नुहाउँदा, सुगन्धित मैनबत्ती बालेर सुगन्धित हुनुहोस्। बेहोस सुगन्ध, सबै समस्याहरू बिर्सिनेछन्, र सम्पूर्ण व्यक्ति आराम र सुन्दर मुडमा छ.
विवाह मैनबत्ती ---सुगन्धले आनन्दको उच्च भावना ल्याउन सक्छ
सुगन्ध महासागर धेरै, धेरै ग्रीष्मकालीन छ। सिट्रस, फ्लोरल र भेनिलाको सुगन्ध एकदमै मिल्छ, जसले मलाई बालीको सम्झना दिलाउँछ, न्यानो समुद्री हावा र घाम। यस्तो प्रकाशयान्की शैली मैनबत्तीहरू जस्तै विवाह मैनबत्ती विवाहमा तपाईंलाई रोमान्स मात्र होइन, भविष्यको लागि खुसीले भरिपूर्ण बनाउँछ। सुगन्धले विवाहमा मीठो सम्झनाहरू थप्न दिनुहोस्। यो मैनबत्तीलाई स्मारिकाको रूपमा लिनुहोस्, र उपहार प्राप्त गर्ने अतिथिहरूले पक्कै पनि मिठास महसुस गर्नेछन्।
क्लिक गर्नुहोस्--D16T D08T
घर सजावट मैनबत्ती --- बिस्कुट सुगन्ध गिलास मैनबत्ती
घर, बस्नको लागि सबैभन्दा लामो ठाउँको रूपमा, पक्कै पनि यो सुन्दर र न्यानो हुनुपर्छ। आफ्नो घरलाई सुन्दर बनाउने सबैभन्दा सजिलो र प्रभावकारी तरिका होअरोमाथेरापी मैनबत्ती, जस्तैaगिलास सुगन्धित मैनबत्ती. यी मैनबत्ती सबै संग प्रयोग गरिन्छ सोया मोम मा गिलास मैनबत्ती जार, तपाईलाई सुगन्ध मनपर्छ छान्नुहोस्। बिस्कुट वालैभेन्डर मैनबत्तीहरू धेरै स्फूर्तिदायी गन्ध, धेरै मीठो छैन। न्यानो जाडो सप्ताहन्तको लागि धेरै उपयुक्त, घरमा बसेको, कम्बलले ढाकिएको, अलिकति मीठो पाठ पढ्नुहोस्, न्यानो सुगन्धमा सुत्नुहोस्। प्रकाश पछि, कोठा सुरुचिपूर्ण सुगन्धले भरिएको छ, जसले आराम र न्यानो महसुस गराउँछ।
क्लिक गर्नुहोस्--A08M A07M A08M
योग र मसाज मैनबत्ती --- आराम मैनबत्ती
योग वातावरणको वायुमण्डलको बारेमा बढी विशेष छ, त्यसैले तपाईले प्रकाश गर्न सक्नुहुन्छ सुगन्धित मैनबत्तीहरू योग को समयमा। एक्लै योग अभ्यास गर्दा, तर यसको मतलब यो होइन कि तपाईं एक्लै र एक्लै अभ्यास गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईं पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छटिन मैनबत्तीहरू योगलाई रोमान्टिक बनाउन। सुगन्ध मैनबत्ती तपाईंको योग अभ्यासमा रोमान्टिक वातावरण ल्याउनुहोस्। यसलाई मसाजको लागि पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ।मसाज मैनबत्ती, प्राकृतिक प्रयोग मसाज मोम वा 100% प्राकृतिक सोया मोम, यसले शरीर र दिमागलाई आराम गर्ने प्रभाव मात्र प्राप्त गर्न सक्दैन, तर छालालाई पनि सुन्दर बनाउँछ, तपाईंलाई पूर्ण रूपमा जीवनको अद्वितीय स्वादको आनन्द लिन अनुमति दिन्छ।
क्लिक ---A06M D25P L01H
होटल सुगन्धित मैनबत्ती र रिड डिफ्यूजर
बाथरूमको अनौठो गन्धबाट छुटकारा पाउनको लागि सुगन्धित मैनबत्तीहरू, यो ताजा र स्फूर्तिदायी सुगन्ध छनोट गर्न सबै भन्दा राम्रो छ। को बारेमामैनबत्ती कन्टेनर, तपाईं छनोट गर्न सक्नुहुन्छ टिनको भाँडो वा गिलास मैनबत्ती जार। फलफूल वा सिट्रस श्रृंखलाको सुगन्धले विचित्र गन्ध हटाउनमा राम्रो प्रभाव पार्छ। रोमान्टिक स्वादलाई शान्त पार्न र स्नानलाई आध्यात्मिक उपचार बनाउन नुहाउने क्रममा सुगन्धित मैनबत्ती पनि बाल्न सक्नुहुन्छ।
रिड डिफ्यूजर आफैले सुगन्ध उत्सर्जन गर्न सक्छ, जुन एक धेरै राम्रो स्फूर्तिदायी, रोमान्टिक चीज हो जसले वातावरण सिर्जना गर्दछ र भावना स्थापित गर्दछ। यो सबै महान, सुरुचिपूर्ण, र विशिष्ट देखिन्छ।
क्लिक गर्नुहोस् ----A03P XP01 H12
DIY गिलास सुगन्धित मैनबत्तीहरू---आफैले मैनबत्तीहरू बनाउने
विशेष दिनमा उहाँलाई विशेष उपहार कसरी दिने? घरेलु सुगन्धितगिलास मैनबत्तीहरू ढक्कन संग तपाईको उत्तम छनौट हो। को लागी सबै सामाग्रीहरु उपलब्ध गराउछौसुगन्धित मैनबत्तीहरू बनाउने. सोया मोम, सुगन्ध तेल, मैनबत्तीको भाँडो, ढक्कन संग मैनबत्ती जार (म्याट गिलास जार वा फ्रोस्टेड गिलास जार), मैनबत्ती विक्स, wick स्टिकर, विक केन्द्रित उपकरण, भाँडो, मैनबत्ती रङ। गुलाब, ल्याभेन्डर, आँप, स्ट्रबेरी र यस्तै अन्य जस्तै तपाईलाई सुगन्ध मनपर्ने कुरा छनौट गर्न स्वतन्त्र महसुस गर्नुहोस्। हरेक सुगन्धको यो विशेष अर्थ छ। अरूलाई उपहारको रूपमा आफैले बनाएको सुगन्धित मैनबत्ती दिनुहोस्, तपाईंको सबैभन्दा प्यारो आशीर्वादको प्रतीक हो।
क्लिक गर्नुहोस्------KA06M A09T मैनबत्ती बत्ती सोया मोम मैनबत्ती उपकरण केन्द्रित उपकरण